Mpiady Anaty Akata Taloha No Mitondra Ao El Salvador Ankehitriny, Afa-Mampitsahatra Ny Famonoan’Olona Ve Izy? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Jona 2014 19:19 GMT
Vakio amin'ny teny Español, বাংলা, Deutsch, Português, English
Nanatontosa ny fianianany amin'ny mahafiloha azy tamin'ny alahady (voalohany jona) teo nandritra ny lanonam-panjakana tsotsotra kely ny filoha Salvador Sánchez Cerén. Ny antoko mifikitra aminy moa dia miantso azy ho “profe” [fanafohezana ny “profesora”, mpampianatra amin'ny teny espaniola] ho fanomezam-boninahitra ny asa nataony voalohany amin'ny maha-mpampianatra azy, raha manonona azy ho “komandin'ny mpiady anaty akata marxista taloha” kosa ny fanoratan-gazety. Fa vitsy kosa no liana amin'ny fanamby ara-politika miandry azy amin'izao fotoana izao. Tao anatin'ny herinandro vitsivitsy izao dia mitombo avo roa heny isan'andro ny tahan'ny famonoan'olona ao amin'ity Repoblika kely iray ao Amerika Afovoany manana mponina enina tapitrisa ity
Voampanga ho manitsakitsaka ny fampitsaharan'ady niaraha-nosoniavina tamin'ny governemanta, roa taona lasa izay, ireo andian-jiolahy matanjaka ao El Salvador antsoina hoe MS13 sy Barrio 18 ary nataon-dry zareo angamba izany mba hanaovana adivarotra vaovao amin'ny filoha hoavy.
Ny filoha Amerikana Latinina avy eo amin'ny manodidina no mandrafitra ny delegasiona iraisampirenena. Nahazo ny tehaka mavesatra sy maresaka indrindra nandritra ny fanolorana i Rafael Correa, ilay mpitarika tsy mitsaha-miteny sy mampiady hevitra indraindray avy any Ekoatera, sy ny filoha Boliviana Evo Morales.
Correa nampahatsiahy ilay eveka Katolika Oscar Romero, maherifon'ny fironana havia tao El Salvador ary mihoatra noho izany ho an'i Amerika Latina, nisy namono.